Fanaovana sinto-mahery Lehilahy 4 voasambotra teny Isotry
Ambatomainty Ikamamavony Sarona ny basy iray sy grenady
Noho ny fitarainan’ny olona amin’ny firongatry ny sinto-mahery eny amin’ny faritra Isotry sy ny manodidina iny dia nanamafy hatrany ny ezaka amin’ny fampandriana fahalemana ny tanana ny Polisy avy ao amin’ny boriborintany fahaefatra ka namerina indray ny
« opération d’harcélement » izay efa asa fanaony. Nohetsehina indray araka izany ireo polisy miasa ao an-toerana fa manao ny fanamiana sivily. Omaly alahady 10 mey dia lehilahy miisa 04 no voasambotry ny polisy tokony tamin’ny 05 ora maraina ka ny iray dia teny akaikin’ny EPP Ambodin’Isotry. Ny ambiny kosa dia teny amin’ny tetezan-dRamala izay toerana tena hikoizana amin’ity asa ratsin’ireto mpanendaka sy mpanao sinto-mahery ireto. Maro ny fitarainana sy fitoriana mahakasika azy ireo efa voarain’ny Polisy izay fantatra fa mitondra fitaovam-piadiana mihitsy indraindray.